DEPIOTE JOCELYNE MAXIME : Mitady ny fomba rehetra hahafahana misambotra azy ny Hvm
Mitohy ny antsojay ataon’ny mpitondra fanjakana ao amin’ny Hvm amin’ireo olom-boafidy tsy mitovy firehana politika aminy fa indrindra ireo miara-dia amin’ny filohan’ny Tetezamita teo aloha, 14 avril 2018
Andry Nirina Rajoelina. Hoesorina amin’ny toerany ny Ben’ny tanànan’i Mahajanga, Andriantomanga Mokhtar ary efa nampahafantatra mialoha an’izany ny mpikambana ao amin’ny governemanta iray rehefa nivahiny tao amin’ny onjam-peo tsy miankina iray ny alakamisy teo. Noroahina tao amin’ny trano fonenany teny Amparibe taorian’ny hetsika nataon’ireo depiote Mapar, Tim, Vpm, Mmm ary tsy miankina manohitra ny lalàna mifehy ny fifidianana tsy nasiam-panitsiana ny solombavambahoka, Razanamahasoa Christine andro vitsivitsy lasa izay.
Tsy ity farany irery no tadiavin’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Hvm hanaovana ramatahora sy enjehina fa ny depiote hafa ihany koa ka anisan’izany ny depiote Jocelyne Maxime voafidy tany Antsiranana. Araka ny loharanom-baovao nisy nanadihady ny fomba fampiasan’ity farany ny volan’ny « Cld » fa tsy nahitana zavatra maloto. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia namporisihina hitory an’ny depiote Jocelyne Maxime ny tompon’andraikitra ambony iray ao amin’ny Antenimieram-pirenena fa tsy nanaiky hiditra amin’ny kilalao maloto.
Ny fanaovana antsojay sy fanaparam-pahefana amin’ireo izay heveriny fa mety hanelingelina azy amin’ny fifidianana manaraka no hitan’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Hvm fa mety. Na izany na tsy izany tsy hampihemotra ny depiote Jocelyne Maxime velively izany rehetra izany ary hijoro hatrany ny tenany, hoy izy hiaro ny tombotsoan’ny vahoaka sy ny firenena. Alefa ihany ry Hvm a ! « Ny marigny koa havy vandy jiaby milefa », hoy ny fiteny any amin’ny tapany avaratry ny Nosy.
Mitady ho very an-javony ny raharaha Mbola Rajaonah, Rolly, Fidèle FANAKORONTANANA FILAMINAM-BAHOAKA (295) 14 janvier 2019 Halefa eny amin’ny Fitsarana amin’izay ny dosien’i Mbola Rajaonah TALE JENERALIN’NY BIANCO (169) 17 janvier 2019 Nanamafy ny fanovana goavana hoentiny ny Filoha Rajoelina FANDRAISANA NY FITANTANANA NY FIRENENA (76) 20 janvier 2019 Tafakatra sivy ireo olona namoy ny ainy MAHAMASINA - FIHOTSAHANA TRANO (66) 20 janvier 2019 Rangahy iray 64 taona maty notetitetehina TSARAVANJA - ANTETEZAMBARO (51) 20 janvier 2019 Nahitana ombivavy bevohoka novonoin’olona AMPITOLOVA BELOBAKA MAHAJANGA (49) 20 janvier 2019